‘सट्टेबाजी’का डनलाई सम्पत्ति सुद्दिकरणको मुद्दा ? | My News Nepal
‘सट्टेबाजी’का डनलाई सम्पत्ति सुद्दिकरणको मुद्दा ?
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा सट्टेबाजीको धन्दा चलाएको आरोपमा पक्राउ परेकामाथि सम्पत्ति सुद्दिकरण मुद्दामा पनि अनुसन्धान हुने भएको छ । महानगरीय प्रहरी परिसरको बिषेश टोलीले सट्टेबाजी गरेको आरोपमा पूर्व राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी तथा म्याच फिक्सिङमा मुछिएका अन्जन केसी, गौरव तिवारी, काभ्रेका भुपेन्द्र कुँवर, नुवाकोटका दिनेश वोगटी, भक्तपुरका विजय श्रेष्ठ, र भक्तपुरकै नरेन्द्र सुवाललाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरु सट्टेबाजका डन भारतीय नागरिक नागराज भन्ने अमित अग्रवालका सदस्य हुन् ।
यो समुहले आईपीएल तथा अन्य राष्ट्रिय खेलहरुमा जुवा अर्थात सट्टेबाजको धन्दा चलाउँदै आएको थियो । पछिल्लो समय आईपीएल खेलमा बाजी थाप्ने नेपालीको संख्या दिन प्रतिदन बढ्न थालेपछि अनलाइनमार्फत गैरकानुनी कारोबार पनि ह्वात्तै बढेको थियो । आईपीएलमा मात्रै सट्टेबाजीमार्फत नेपालबाट वार्षिक ५ अर्ब रूपैंयाँ बिदेशिने गरेको छ ।
प्रहरीको अनुसन्धानबाट तिवारीको खाताबाट तीन करोड २२ लाख ९७ हजार, केसीको बाट २ करोड ७७ लाख ५ हजार, र कुवरको बाट १ करोड ७० लाख, दिपकको बाट ७७ लाख कारोबार गरेको खुलेको छ । उनीहरुलाई जुवा र ठगीमा प्रहरीले मुद्दा चलाउने बताएको छ । तर, उनीहरुको खातामा अवैध रकम भेटिएको हुँदा सम्पत्ति सुद्दिकरणमा पनि उनीहरुमाथि कारबाही हुने भएको छ । महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले पक्राउ परेकाको खातामा अवैध रकम भेटिएको हुँदा उनीहरुमाथि सम्पत्ति सुद्दिकरणको मुद्दा चल्न सक्ने बताएका छन् ।
आइपिएल र अन्य खेलहरुमा पनि सट्टेबाजीका लागि भारतीय नागरीक नागराजले नेपालमा बसेर धन्दा चलाउँदै आएका छन् । आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रमुख छँदा नागराजमाथि अनुसन्धान गर्न लागेपछि उनी भागेर गोवा पुगी धन्दा शुरु गरेका थिए । महाशाखाबाट खनालको सरूवा भएसँगै नागराज पुनः नेपाल आई धन्दा चलाएका थिए ।
नेपालमा सट्टेबाजीकै लागि कम्तिमा पनि ५ सय भन्दा बढि व्यक्ति सक्रिय छन् । काठमाडौं, वीरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज, चितवन, मोरङ, बिराटनगर सट्टेबाजीका प्रमुख बजार हुन् । सट्टेबाजीमा ५ हजारदेखि ५ करोडसम्मको कारोबार हुँदै आएको छ । सट्टेबाजको कारोबारमार्फत नागराजले मात्र वर्षमा अवैध तरिकाले १५ करोड भन्दा बढि रकम कमाउने गरेका छन् । नागराज प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । ( यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिबाट )